भिडियो Archives - नेपाल दृष्टि
पहिलो ‘नेपाल आइडल’ बुद्ध लामा पहिलो पटक आफ्नै वास्तविक स्वरको गीतगजल लिएर दर्शक तथा श्रोतामाझ आएका छन् । अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका गजलकार सुरेश वाग्लेद्वारा रचना गरिएको तिमी साथ भएपछि शीर्षकको गजलमार्फत गायक लामा दर्शकमाझ आएका हुन् । गजलकार वाग्लेकै गजलगृह नामक च्यानलबाट उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । हरि लम्सालद्वारा सङ्गीतबद्ध उक्त गजललाई गोपाल रसाइलीले सङ्गीत संयोजन गरेका हुन् । चन्द्र चौधरीद्वारा मिक्सिङ तथा मास्टरिङ गरिएको उक्त गीत अकेष्टिक नेपालमा रेकर्ड गरिएको हो । अर्जुन अधिकारीद्वारा निर्देशित उक्त भिडियोमा चलचित्रका लोकप्रिय जोडी पल शाह तथा आँचल शर्माले अभिनय गरेका छन् । अभिनेता पल तथा अभिनेत्री आँचलले भिडियोमा गजल भावना अनुसारको अभिनय गरेका छन् । उत्सव दाहालद्वारा छायाङ्कन गरिएको उक्त म्युजिक भिडियोलाई निशान घिमिरेले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोमा सुरेन बसेलको कोरियाग
देशका लागि गतिलो सन्देश स्वरुप प्रचण्डकी नातीनीले गाईन केपी ओलिको गीत(भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं। गायक नविन खड्का र प्रचण्डकी नातीनी गायीका स्मीता दाहालको स्वरमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नामक गीत सार्बजानिक भएको छ ।उक्त गीत नेपालको पानी जनताको लगानी बोलको गीत गायक खड्काको लय,शब्दमा रहेको छ भने पूर्व उर्जा तथा गृह मन्त्रि जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) को परिकल्पनालाई गायक खड्काले गितमा उनेर बजारमा ल्यायका हुन । युएईका बिभिन्न शहरहरुमा छायाङ्कन् गरिएको उक्त भिडियो जन प्रगतिशिल मञ्च यु.ए.ई, अन्र्तगत प्रगतिशिल कलाकार संघ यूएईकाकलाकारहरुको नृत्य प्रश्तुत रहेको छ भने अभिनय युवा सामाजसेवि ओम उप्रेती, अनिस तामाङ, अन्जुली लोप्चन, बाबुराम विश्वकर्म, शम्भु वाईबाको रहेको छ । सो म्युजिक भीडियोमा नृत्य निर्देशक राजेश लामाले गरेका हुन् भने सम्पादन दिपक विष्टले र छायाङकन गगन वि.क ले गरेका छन् ।
भक्त दर्लामी मगरको झ्याउरे गीत “घाँगी गुफा घुम्न जाउँ “(भिडियो)
काठमाडौं- चर्चित लोक तथा दोहोरी गायीका देवी घर्ती तथा लोक दोहोरी गायक भक्त दर्लामी मगरको "घाँगी गुफा घुम्न जाउँ " बोलको गीत बजारमा आएको छ । निकै रमाइलो उक्त म्युजिक भिडियो लाई हमाल म्युजिकको युट्युब च्यानलले बजारमा ल्याएको हो । म्युजिक भिडियोमा गोबिन्द मल्ल ठकुरी र सपना मगर युगल जोडीको दमदार नृत्य तथा अभिनय रहेको छ । गीतमा सब्द भक्त दर्लामी मगरको रहेको छ भने लय के.बी सारु मगरको रहेको उक्त म्युजिक भिडियो लाई शुधन बस्नेत र प्रेम राज लामीछानेले सम्पादन गरेका छन् । उत्पादक तथा वितरक हमाल म्युजिक प्रा.लीले गरेको छ । स्मृति तिमिल्सिनाले (गुरु आमा)निर्देशन गरेको उक्त म्युजिक भिडीयो लाई सुरेश श्रेष्ठले छायांकन गरेका छन् । भिडियो - https://youtu.be/GyAU1A50074
फिरफिरे डांडा कि सोल्टिनी संग गायक तथा मोडल एम.बि गुरुङले मेटाए सांगीतिक प्यास(भिडियो सहित)
राजु बोहरा–काठमाडौँ । स्थाई घर गोर्खा बुंगकोट मकैपुर र हाल जापानमा रहँदै आएका प्रतिभावान कलाकार एम.बि गुरुङ को एक निकै मन छुने गीत हालै बजारमा आएको छ । आफ्नै कला संस्कृति र मौलिकता भित्र रुमलिएको उक्त गीत कौरा चुटका गीत "फिरफिरे डांडा" नामको साथमा रहेको छ । एम.बि द्वारा अभिनित फुलले इर्छ्या गर्ला लगाएतका बिभिन्न गीत संगीतको म्युजिक भिडियो दर्शकहरु माझ आएता पनि उनि द्वारा स्वर बद्ध यो पहिलो गीत हो । यस लगत्तै "कुन संसार" बोलको गीत पनि एम.बि को प्रस्तुतिमा बजारमा आउने तयारी भैरहेको छ । मोडल तथा गायक एम.बि गुरुङको प्रस्तुतिमा अहिले बजारमा आएको गीतमा एम.बि संगै चर्चित गायिका देवी घर्तीको पनि सुमधुर स्वर सुन्न सकिन्छ । नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतको क्षेत्र पछिल्लो समयमा पश्चातीय संगीत तिर ढल्केको हो कि भन्ने चारै तिर बाट गुनासो आइरहंदा प्रस्तुत कौरा चुटका "फिरफिरे डांडा" बोलको गीतले अशंख
नायिका ऋचा ठकुरीको चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’ ट्रेलर रीलीज
नायिका ऋचा सिंह ठकुरीको निर्माण तथा अभिनय रहेको चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’ बैशाख ७ गतेदेखी प्रदर्शनमा आउने भएको छ । हालै चलचित्रको ट्रेलर रीलीज गरीएको छ ।ट्रेलरमा कमेडी संवाद र द्धन्द्धका दृश्यहरु समावेश छन् । चलचित्रलाई राज थापाले निर्देशन गरेका हुन् । अबिर हाउस प्रा।लिको प्रस्तुती रहेको सुपर गोर्खे मा ऋचा सहित सुरज सिंह ठकुरी, निराजन लुईंटेल, भुपेन्द क्षेत्री, सचिन केसी, कामना भुजेल, भानु डेभिड विष्ट लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । किरण माइकलको लेखन रहेको चलचित्रमा चन्द्र पन्तको द्धन्द्धन निर्देशन छ । विवाह पछि ऋचा चलचित्र निर्माणमा फर्किएकी हुन् । https://youtu.be/sjc2_oR3z38
हेर्ने कथा – चौकिनीको कथा
बाग्लुङको बुर्तिबाङबाट गाडीमा ५ घण्टा उकालो लागेपछि ढोरपाटन पुगिन्छ । कच्ची सडक हुँदै उत्तरतिर लाग्दा झुरुप्प वस्तीहरु भेटिन्छन् । तर गाउँ सुनसान, फाट्टफुट्ट मात्रै मान्छे । फाट्टफुट्ट मान्छेको बीचमा भेटिए चौकिनीहरु । यति धेरै घर भएपनि मान्छे किन कम भएका होलान् ? अनि को होलान् यी चौकिनीहरु ? उनीहरु गाउँमा के गरेर बसेका होलान् ? प्रस्तुत छ हेर्ने कथामा तिनै चौकिनीको कथा https://youtu.be/T8_UvFBbFw0
Mar152018 by Kamal SimtaliNo Comments
गायक माल्दाईले ल्याए अर्को कोशेली “गर्लफ्रेण्ड छैन” (भिडियो सहित)
काठमाडौं - गायक कमल बि.सी.माल्दाई अहिलेका लोकप्रिय तथा युवा गायकको नामले चिनिने नाम हो । सधै मौलिक र समय परिबेशका गीत गाउने गायक बिसी, यसपटक भने अहिलेसम्मकै फरक खालको थेगो र शब्द रहेको “गर्लफ्रेण्ड छैन” डिजे गीत बजारमा ल्याएका छन । गायक बिसीले धेरै समयपछिको मेहनत पछि “गर्लफ्रेण्ड छैन” गीत सार्वजनिक गरेका छन ।पहिलो पटक आफ्नै गीतबाट अभिनयमा समेत डेब्यु गरेका गायक बिसीले यसअघि चार दर्जन बढी लोक तथा दोहोरी गीत बजारमा ल्याईसकेका छन । दिपेश थापाको प्रस्तुतिमा रहेको “गर्लफ्रेण्ड छैन” गीत अहिलेसम्मै पृथक गीत रहेको छ । नेपाली गीतसंगीतमै पहिलो पटक “हेन्डसम छु तर गर्लफ्रेण्ड छैन, बाईक छ तर हेल्मेट छैन” यो खालको शब्द, थेगो पहिलो पटक नै आएको छ । यस गीतको अडियो त्यत्तिकै उत्कृष्ट रहेको छ भने भिडियो झनै उत्कृष्ट बनेको छ । हेन्डसम हुँदा हुँदै पनि गर्लफ्रेण्ड नहुनु र बाईक हुँदा हुँदै पनि हेल्म
फेरि ल्याए गायक गणेश सिंह ठकुरीले “पछेउरी छ नासो”(भिडियो सहित)
कमल सिम्ताली/काठमाडौ - मालती डिजिटल प्रालिको गौरवमय प्रस्तुतिमा देबेन्द्र सिंह ठकुरीको"पछेउरी छ नासो"बोलको लोकदोहोरी गीत हालै सार्वजनिक भएको छ। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा न. ९ खानिखोलामा जन्मिएका द्वय गायक गणेश सिंह ठकुरी र गायिका करीष्मा बिसिको समधुर स्वरमा उक्त गीत सार्वजनिक गरीएको हो।गीतसङ्गितमा औधी रुचि राख्ने गायक सिंह केही बर्ष यता रोजगारीको शिलशिलामा मलेसिया रहदै आएका छन। देबेन्द्र सिंह ठकुरी र बिनोद बाबू केसिको शब्दमा बिनोद बाबू केसिले नै यस गीतमा म्युजिक भरेका छन। कपिल लामाद्वारा निर्देशित गीतको भिडियोमा मोडल बिमल अधिकारी र अनिशा चन्दले अभिनय गरेको गीतको भिडियो राजेश घिमिरेले खिचेका छन भने अमर शाक्यले सम्पादनको जिम्मा पाएको गीतलाई म्युजिक नेपाल प्रालिले बजार व्यवस्थापन गरेको छ। हेर्नुहोस गीतको पूरा भिडियो। https://m.youtube.com/watch?v=zXUm27ufhFM&feature=youtu.
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुग्दा…(भिडियो सहित)
फिचर, भिडियो, समाचार
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुग्दा परिवारजनमा हर्षको सीमा नै रहेन, पुर्नजन्म पाएको झै भएको भाग्यमानी दिनेशको कथन काठमाडौं । यूएस बंगलाको विमान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार दुर्घटना हुँदा धेरै जीवनले यो जगत त्याग्नु प¥यो । परिवारमा पीडाको पहाड खस्यो । अनि खुसी दैवले खोसेर लग्यो । तर, त्यहि दैवले कसैको जीवनमा पुनःजन्मको अध्याय पनि सुरु गरिदियो । विनिता हुमागाई । उमेर २७ वर्ष । काठमाडौंको शान्तिनगर बस्ने २ छोराकी आमा हुन् उनी । यतिबेला उनमा उत्साहको सीमा नै छैन । जीवनका धेरै ठूलो लडाई जिते जस्तो भएको छ । हुने नै भयो किनकी उनले यहि जीवनमा डुब्न लागेको घाम फेरि उदाएको जो देख्न पाएकी छिन् । सोमबार काठमाडौंको विमानस्थलमा विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा उनका श्रीमान् दिनेश हुमागाई पनि परेका थिए । तर भाग्य बलियो भएर उनी बाँचे । सामान्य चोटपट
Omg भिडियो हेर्नुस् यसरी भएको थियो plane crash
Omg भिडियो हेर्नुस् यसरी भएको थियो plane cras भिडियो हेर्नुस - https://youtu.be/9WX0VzljHOE